Kooxda Real Madrid oo Gareth Bale iyo lacag kaash ah isku dareysa si ay Paris Saint-Germain uga hesho Neymar Jr – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo Gareth Bale iyo lacag kaash ah isku dareysa si ay Paris Saint-Germain uga hesho Neymar Jr
(Madrid) 20 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay xiiseynayso Weeraryahanka naadiga Paris Saint-Germain ee Neymar Jr, waxaana ay sameyn doontaa dalab ay ku doonayso oo ku kacaya lacag kaash ah oo dhan 115 milyan oo gini oo lagu daray Gareth Bale.
Warar dhowaan soo baxayey oo la isla dhexmarayey ayaa soo jeedinayey in mustaqbalka xiddiga xulka Brazil uusan fadhin, waxaana ay u muuqataa inuu tagi doono, iyadoo kooxda PSG ay tixgelinayso inay iska iibiso xagaagan.
Barcelona ayaa dhankooda si xoog leh loola xiriirinayaa xiddigoodii hore ee Neymar Jr, kaasoo ka soo tagay garoonka Camp Nou lacag rikoorka adduunka ahna ugu biiray garoonka Parc des Princes xagaagii 2017-kii.
Real Madrid ayaa dhankeeda sii wadda inay kormeeraan xaaladda, si kastaba, wararka laga helayo gudaha dalka Spain ayaa soo jeedinaya in kooxda 13-ka goor ku guuleysatay koobka horyaallada Yurub ay dalab ku kacaya 115 milyan oo gini oo lagu daray Bale ka gudbinayso Neymar Jr.
Los Blancos ayaa eegeysa inay iska fogeyso xagaagan xiddiga xulka qaranka Wales ee Bale oo mushaar badan kaga xisaabtama, kaddib markii uu Tababare Zinedine Zidane sheegay inuusan laacibkan ku jirin qorshihiisa.
Wakiilka 29-sano jirkaan ayaa iska diiday fursad uu heshiis amaah ah ugu wareegi lahaa dhinaca Faransiiska, taasoo ka dhigeysa inuu doonayo in PSG ay si joogto ah ula saxiixato ama uu u raadiyo koox cusub oo uu si joogto ah ugu ciyaaro.
Kooxaha Horseed iyo Dekedda oo galabta isku garab dhacay kulan ka tirsan Somali Premier League
Group-ka E ee Koobka Adduunka Dumarka 2019 oo la soo gaba-gabeeyay… + SAWIRRO